Fantaro ny fomba fanaovana balsama molotra tsara ao an-trano | Bezzia
Manana vitsivitsy Zava-dehibe ny molotra hydrated raha te hampiasa lokomena tsara indrindra isika ao amin'izy ireo. Saingy noho izany dia tsy maintsy manana kosmetika tena ilaina isika. Amin'ny lafiny iray dia misy ny fikosohan-molotra ary etsy an-daniny ny balsam-molotra, antsipiriany izay tsy mety banga ao anaty kitaponay sy ao anaty kitapo hatsaran-tarehy. Amin'ity indray mitoraka ity dia ho hitantsika ny fomba ahafahanao manao balsama amin'ny molotra, karazana kosmetika azontsika atao ao an-trano.
ny kosmetika vita an-trano dia azo noforonina amin'ny akora tsara ary araka ny itiavantsika azy, miaraka amin'ny hanitra ankasitrahanay. Izany no mahatonga ny olona maro hampiasa akora namboarina namboarina hanaovana ireo karazana kosmetika fototra toy ny balsama molotra. Misy raikipohy marobe, na dia hahita vitsivitsy aza isika hahitana ny fomba hamoronana ny balsama molotra tonga lafatra.
1 Inona no ilainao amin'ny balsam-molotra
2 Lip balm miaraka amin'i Vaseline
3 Voan-tantely tantely
4 Menaka oliva volo ho an'ny balsamao
Inona no ilainao amin'ny balsam-molotra
Ny balsam-molotra dia azo atao amin'ny antsipiriany vitsivitsy. Tsy maintsy manana kaontenera mety amin'ny balsama ianao, izay kely. IRETO kaontenera dia tokony diovina tsara alohan'ny hampidirana ireo fangaro. Etsy ankilany, mila mahita ny akora rehetra sy zavatra afangaro izy ireo, madio ihany koa, toy ny kaopy.
Lip balm miaraka amin'i Vaseline
La Vaseline dia azo ampiasaina tsotra izao ho toy ny balsam-molotra, na dia avy aminy aza isika dia afaka manamboatra balsama isan-karazany amin'ny tiantsika. Ampiasao ny jelly solika ho fotony. Miaraka amin'ny sotro fihinana roa dia afaka manamboatra balsama manokana ianao. Atsofohy ao anaty kaopy izy ireo ary ataovy ao anaty microwave mba hiempo ny jelly petrole ahafahanao afangaro amin'ny akora hafa. Azonao atao ny manampy menaka voanio kely, izay tena mahavelona ary ny hatsiaka dia misy tsy fitoviana lehibe, mety amin'ny balsam-molotra. Dingana iray hafa azonao atao ny manampy loko kely amin'ny lokomena kely na amin'ny vovoka voajanahary amin'ny maso na mena mena. Mikasika ny fofona, ny menaka esansiela dia azo ampiasaina hanomezana fofona manokana ny balsaminao. Misy karazana menaka maro izay manampy ny fananany koa. Afaka misafidy iray toy ny lavender na voasarimakirana ianao.
Azontsika atao ny mahita ny tantely any amin'ny magazay manokana na amin'ny mpivarotra raokandro. Ity karazana akora ity dia tena ilaina amin'ny kosmetika sasany. Amin'ity tranga ity ny tantely no hanome ny tsy fitovizan'ny balsam-molotra amin'ny kosmetika namboarinay. Azonao atao ny mampiasa an'io tantely io, na dia misy safidy vegan toy ny savoka vary ihany koa. Amin'ity tantely miempo ao anaty bain-marie ity dia mila manampy menaka amandy kely isika. Izy io dia hanome azy malefaka ary manampy amin'ny famonoana bebe kokoa ny molontsika. Ny menaka almond dia fototra lehibe iray azonao ampiasaina hanatsorana ny hoditra iray manontolo satria misy vitamina E koa ao aminy, izay antioksida mahery ary manampy amin'ny fisorohana ny fahanton'ny hoditra. Azonao atao koa ny manampy dibera shea, singa fototra amin'ny fikolokoloana ny hoditra. Ity dibera ity dia mety amin'ny hydration ary misy vitamina E sy A.
Menaka oliva volo ho an'ny balsamao
Ny fampiasana jelly solika na tantely ho fotony dia azonao atao ny mampiasa akora iray izay fototr'izany, tsy amin'ny sakafontsika ihany fa amin'ny fikolokoloana hatsaran-tarehy koa. ny Ny menaka oliva virjina dia mety indrindra amin'ny fanalefahana ny hoditra Ary azo ampiasaina amin'ny fomba maro izy io, na amin'ny volo na amin'ny hoditra ary mazava ho azy fa balsam-molotra satria tsy manimba ihany koa raha atelintsika azy rehefa apetraka amin'ny molotra. Ity menaka ity dia manana fananana antioksida tsara koa ka hanampy antsika hitazona ny molontsika ho tanora kokoa sy hikolokolo bebe kokoa ny hodintsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Ahoana ny fanaovana balsama molotra